Laascaanood Oo Si Foolxun Loogu Toogtay Sarkaal Xukuumadda Somaliland Ka Tirsan – Araweelo News Network (Archive)
Laascaanood(ANN) Xisaabiyihii maamulka Gobolka Sool Marxuum Cabdi Cawil Xasan, ayaa caawa fiidkii lagu toogtay badhatamaha suuqa magaalada laascaanood waxyar ka dib markii uu ka soo baxay salaadii makhrib, isagoo xiligaa u socday gurigiisa oo aan sidaa
uga fogayn goobta lagu dilay.
Sida ay sheegayaan wararku, marxuumka, waxa toogtay dablay aan la aqoonsan, kuwaas oo tacshiirad rasaas ah kala beegsaday madaxa, kadibna baxsaday, taas oo sababtay inuu ku nafwaayo halkaa marxuumku.
Ma jiro dilka sarkaalkaa cid loo qabtay, balse ciidamada Booliska ayaa bilaabay, iyadoo ay dablaydii falkaa geystay baxsadeen.
Dhinaca kale dilkan ayaa kusoo beegmay, iyadoo xalay hal askari dhaawac fududi kasoo gaadhay weerar bamboo oo lagu qaaday Guriga uu Maayarka cusub ee magaalada Laascaanood deganyahay, iyadoo askarigaasi ka mid ahaa ilaalada maayarka Laascaanood.
Dilalka xarunta gobolka Soola, ayaa dhawrkii sanadood ee u danbeeyay ka socday halkaa, kuwaas oo aan cidna loo qaban, isla markaana lala beegsado masuuliyiinta gobolka iyo degmada Laascaanood.